तपाईं बेरोजगार हुनुहुन्छ ? चिन्ता नगर्नुस् ! सरकारले दिनेछ अब काम वा निर्वाह भत्ता — Motivatenews.Com
तपाईं बेरोजगार हुनुहुन्छ ? चिन्ता नगर्नुस् ! सरकारले दिनेछ अब काम वा निर्वाह भत्ता
भदौ ७, काठमाडौं – सरकारले रोजगारीको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न महत्वाकांक्षी व्यवस्था सहितको विधेयक संसदमा प्रस्ताव गरेको छ । मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्न संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा व्यक्तिको योग्यता र सीपअनुसारको रोजगारको ग्यारेन्टी प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकले सीप नहुनेलाई हरेक वर्ष सय दिन बराबरको तलबको आधा रकम भत्तास्वरूप अनिवार्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेटेको छ । यस्तो भत्ता सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुसार पाइनेछ ।
सीप भएका नागरिकले रोजगारीको अवसर पाएनन् भने रोजगार सेवाकेन्द्रले रोजगारी उपलब्ध गराइदिनेछ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार पारी बुधबार संघीय संसद सचिवालयमा पेस गरेको ‘रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ मा बेरोजगारलाई रोजगारीको हकका लागि यस्तो व्यवस्था राखिएको हो । यस्तो भत्ता १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई उपलब्ध गराइनेछ ।
विधेयकमा उल्लेख भएका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तहमा सरकारले ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ स्थापना गर्नेछ । सो केन्द्रले आफ्नो क्षेत्र भित्र रहेका रोजगारदाताको सूची अद्यावधिक गर्छ । सीप भएका तर रोजगार नपाएकालाई रोजगार सेवा केन्द्रले स्थानीय तह, सरकारी वा गैरसरकारी निकाय र संघ संस्थालाई सम्बन्धित स्थानीयतह भित्रका रोजगारदातालाई माग भए बमोजिमको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख छ ।
भूमिहीन दलितलाई जग्गा
यस्तै सरकारले भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को सातौं संशोधन मार्फत भूमिहीन दतिललाई एकपटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउन लागेको हो ।
सरकारले ऐनको दफा ५२ मा क थप गरेर उपदफा १, २, ३ र ४ मार्फत दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था ल्याउन लागेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बुधबार संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको संशोधन विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा भूमिहीन दलितले एकपटकका लागि जमिन पाउने भएका हुन ।